Ei Htet Htet Min's Likes - Myanmar Network
Ei Htet Htet Min's Likes
Back to Ei Htet Htet Min's Page
" How to improve your English " "How to improve your English " "အင်္ဂလိပ်စာကို ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲ" @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ " ဘာသာစကားကို အင်္ဂလိပ်လို Language လို့ခေါ်ပါတယ်။ Language လို့ခေါ်တဲ့ ဘာသာစကားတစ်ခုကို လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင… Discussion " How to improve your English " 18 Likes အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူများ အကြားစွမ်းရည် လေ့ကျင့်… [Zawgyi] အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူများအတွက် လေ့လာစရာ စာအုပ်စာတမ်း၊ မှတ်စုများဟာ ယခုအခါ အွန်လိုင်းမှာရော ပုံနှိပ်မီဒီယာမှာပါ အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ အကြားစွမ်းရည်အတွက် လေ့ကျင့်ဖို့ကတော့ လေ့လာသူမျာ… Discussion အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူများ အကြားစွမ်းရည် လေ့ကျင့်… 51 Likes
Sr. Quality Control Engineer Male /
B.E / M.E (Civil / Mechanical)
Expertise in erection and civil inspection of steel structure construction.
Prefer who has experienced in steel structure + civil…
Blog Sr. Quality Control Engineer Male / 1 Like
မိန့်ခွန်းရေးသားနည်း မိန့်ခွန်းရေးတာနဲ့ စာစီစာကုံး (အက်ဆေး) ရေးတာ တူညီတာတွေ အများကြီးဘဲ။ မိန့်ခွန်းဆိုတာ နှုတ်နဲ့ ပြောရတဲ့ စာစီစာကုံးတစ်မျိုး ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် မိန့်ခွန်းဆိုတာ နှုတ်နဲ့ ပြောတာကို နားထောင်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အ… Discussion မိန့်ခွန်းရေးသားနည်း 37 Likes ဆိတ်ဆိတ်နေထောင်တန်သတဲ့လား (ဒေါက်တာဆန်းမြင့်) (Previously posted by British Council on Myanmar English Teaching Scheme) ဆရာ/မမျိုးဆက်တွေကလည်း တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက် ဖြတ်သန်းသွားကြပါတယ်။ ရှေ့မျိုးဆက်များမှ မိမိတို့ရဲ့ မြတ်နိုးစရာကောင်းတဲ့ အကျိုးရှိတဲ့… Discussion ဆိတ်ဆိတ်နေထောင်တန်သတဲ့လား (ဒေါက်တာဆန်းမြင့်) 14 Likes Vocabulary Skills : ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စ… ဗုဒ္ဓဘာကိုလေ့လာချင်သူများအတွက် မသိမဖြစ်အရေးကြီးသော ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စာ ဝေါဟာရများကို ဘာသာရေးဆိုင်ရာစာအုပ်များမှ ထုတ်နှုတ်၍ လက်လှမ်းမှီသလောက် စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ prophecy - ဗျာဒိတ်ပေးခြင်းfulfi… Discussion Vocabulary Skills : ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စ… 17 Likes
British Council Education Fair 2010 photo British Council Education Fair 2010 8 Likes British Council Education Fair 2010 photo British Council Education Fair 2010 13 Likes မေးလျှင်ဖြေမည် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အမေးအဖြေကဏ္ဍ) ၏ အေ… ယခင်အပတ်တွင် စတင်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာအမေးအဖြေ ကဏ္ဍတွင် မေးမြန်းထားသည့် မေးခွန်းများထဲမှ "Either...or/Neither...nor" ၊ "Just" နှင့် "article" များကို အသုံးပြုပုံရှင်းလင်းဖြေကြားချက်များကို အောက်မှာ ဖြေကြ… Discussion မေးလျှင်ဖြေမည် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အမေးအဖြေကဏ္ဍ) ၏ အေ… 58 Likes
"မသိဘူး" ဟုပြောသောအခါ "I don't know" မှလွဲ၍ေ… [Zawgyi]"မသိဘူး" ဟုပြောသောအခါ "I don't know" ဟုသာအပြောများကြပါသည်။ ဤသင်ခန်းစာတွင် အခြား အလဲအလှယ်အသုံးပြုနိုင်သည့် အသုံးအနှုန်းများကို ဥပမာများဖြင့်ရှင်းပြထားပါသည်။ ယမန်နေ့မှ တင်ပေးလိုက်သော သင်ခန်းစာကဲ… Discussion "မသိဘူး" ဟုပြောသောအခါ "I don't know" မှလွဲ၍ေ… 74 Likes
Big City Small World (Series 1 Episode2- J… Series 1 Episode2- Job offer (အတွဲ (၁)၊ အပိုင်း (၂) အလုပ်ကမ်းလှမ်းခြင်း) Johnny, Olivia and Fadi all offer jobs to Harry. What should he do? Johnny, Olivia နဲ့ Fadi တို့အားလုံးက Harry ကို အလုပ်တွေ… Discussion Big City Small World (Series 1 Episode2- J… 73 Likes မှတ်သားဖွယ်ရာ အင်္ဂလိပ်စာ What can I do for you? vs What can I do you for? စာဖတ်သူတစ်ယောက်က “What can I do for you?” နဲ့ “What can I do you for? တို့ ကွာခြားပုံကို သိလိုသဖြင့်မေးလာပါတယ်။ “What can I do for you?” ကတော့အများသ… Discussion မှတ်သားဖွယ်ရာ အင်္ဂလိပ်စာ 36 Likes
Myanmar Parkson Company Limited Member Myanmar Parkson Company Limited 1 Like မှတ်တမ်းရေးပုံရေးနည်း မှတ်တမ်းရေးပုံရေးနည်း (How To Write A Memo) မှတ်တမ်း (memo) ဆိုတာ အတိတ်ကအရာတစ်ခုလားလို့တောင် ထင်ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၄င်းနေရာမှ e-mail အမှာစာ (message) တွေ အစားထိုးဝင်ရောက်လာတာ ကြာလှပေါ့။ ဒါပေ… Discussion မှတ်တမ်းရေးပုံရေးနည်း 75 Likes စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၄) သဒ္ဒါနှင့် ဝေါဟာရဆိုင်ရာ စာမေးပွဲများ (Grammar and vocabulary exams) - ယခင်အပိုင်းမှ အဆက် ဝေါဟာရများကို မှတ်မိနိုင်စေမည့် အကြံပြုချက်များ (Tips to remember words) ဝေါဟာရများကို မှတ်မိနိုင်စေမည့် အကြ… Discussion စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၄)4Likes English Lesson Highlights from our websites… The Tale of Uzay Yavuz The Tale of Uzay Yavuz isashort story written by Guy Bass,aUK writer, author and illustrator of books for children. The story tells aboutachild and his best friend Uzay… Discussion English Lesson Highlights from our websites…2Likes
IELTS: Improve English & prepare for IELTS S… video IELTS: Improve English & prepare for IELTS S… 31 Likes